Aragtiwanaagsan.com – Maqaal qiimo iyo qaayo badan oon ka akhristay Mareegta Caalamiga ah ee Hadhwanaagnews.com!!
Maqaal qiimo iyo qaayo badan oon ka akhristay Mareegta Caalamiga ah ee Hadhwanaagnews.com!!
Jan 08, 2018 cabdicasiis mohamed Dhacdooyin, Qof Muhiim ah, Wararka, Waxbarasho 0
Waxay ahayd xalay sacaddu markii ay mareysay 11:00 habeenimo markii aniga oo qolkayga dhexjiifa oo daawanaaya Tvga Qaranka warkiisii 11:00 habeenimo,aan laacay tilifoonkaygii gacanta si aan u booqdo Mareegta caalamiga ah,ee hadhwanaagnews.com. waxaan isha ku dhuftay maqaalkan hoos ku qoran ee ka hadlaaya(Dhibta iyo Masiir Aayo xumada ay leedahay Xaasidnimadu oo Soomaalida dhexdeeda ku soo badatay)! Maqaalkan aad hoosta ka akhrisandoontaan waxa qoray nin aan walaahi iyo bilaahi garaneyn laakiin aan la yaabay sida uu u soo diyaariyey iyo soo gudbinta Qisada ku jirta iyo falanqeynta iyo faallada uu ku dhex xarday.Qoraaga maqaalkan oo magaciisa la yidhaahdo:(Maxamed C.kariim Axmed/Shiil),waxa aan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa maqaalkan iyo qoraalkan qiimaha badan ee uu akhristayaasha hadhwanaag la wadaagay oo aan aniguna ka mid ahay.Waxa uu mudan yahay in la siiyo abaalmarin…..waa maqaalkii ugu qiimaha badnaa ee aan ka akhristo mareegta hadhwanaag oo aan had iyo jeer booqdo oo aan anigu laftaydu qoraalayda ku soo qoro.waa maqaalada loo baahanyahay in dadweynaha lala wadaago si loo daweeyo dadka xaasidiinta ah,ee bulshada Soomaaliyeed ku dhex nool.had iyo jeer waxa inna daashaday maqaallo siyaasadeed oo aan bulshadeenna daaweyneyn,laakiin ku abuuraaya mushkilado qabyaaladeed iyo mid nacayb ba.Hadaba,bal ila akhriso mar labaad maqaalkan oo ila qiimee oo u bog oo sii faafi. Waa kan maqaalkii hoos ku qoran ee bilow in aad akhrisato mar kale!!!
Nabsi Xaasid: Qiso Taabaneysa Waaqic Dhab Ah Oo Dalkeena Ka Jira!
Laba nin ayaa mid indho la’aa, ka kalena curyaan ahaa. Maalin maalmaha ka mid ah ayay tashadeen si ay uga tagaan meeshii ay ku noolaayeen oo ay ka socdaalaan. Ninkii indhaha la’aa ayaa soo jeediyay sida laysu raacayo.
Wuxuuna yidhi “Indhoole, anigu xooggii ayaan hayaa, adiguna indhihii ayaad haysaa. Haddaba anigu waan ku qaadayaa, adiguna curyaanow indhihiibaad qabtaa e dhirta iga eeg oo iga du’.” Sidaas ayay labadii nin ku heshiiyeen.
Qoraha maqaalka:Maxamed C/kariim Axmed (shiil)
Emailka qoraaga maqaalka:moxamedshiil@gmail.com
ka dareenceliyo:C.casiis Maxamed Yoonis(ansaari)
Macalin dhiga luuqadaha /Aqoonyahan School for English!!
PROF. MOHAMED AHMED FARAH (JAAFAA), ASTAAMAHA HOGAAMIYAHA WANAAGSAN Daawo warbixin uu Tvga qaranku ka diyaariyey dugsiga Aqoonyahan ee luuqadda ingiriisiga ee ku yaalla hargeysa!!